ZNAPS, mpampitohy andriamby hamenoana ny iPhone sy iPad | Vaovao IPhone
Ny iray amin'ireo endrika mampiavaka indrindra an'ny MacBooks mandritra ny taona maro dia tsy isalasalana fa ny mpampifandray MagSafe. Nanomboka ny 2006 Ity mpampitohy andriamby ity dia nanalavitra ny lozam-pifamoivoizana tamina solosaina finday Apple, ary koa hanamorana ny fifandraisan'ny tariby mamaly, izay amin'ny alàlan'ny fanatonana azy akaiky kokoa ny toerana mifanentana ihany no mampifandray tsara. Fa maninona i Apple no tsy nisafidy rafi-pandefasana toy izany miaraka amin'ireo fitaovan'ny findainy dia zavatra tsy takatry ny maro, fa ankehitriny noho ny tetikasa iray hita ao amin'ny sehatra Kickstarter crowdfunding dia afaka mankafy an'ity mpampitohy ity amin'ny iPhone na iPad ianao, ary ny anarany dia ZNAPS.
Fitaovana tena tsotra izy io: mpampitohy izay miditra ao amin'ny mpampitohy ny tariby ary taratra iray hafa izay ampidirina ao amin'ny mpampitohy ny iPhone, ary mifamatotra miaraka amin'ny andriamby. Amin'izany no ahafahanao mampiasa ny tariby tselatra Apple anao ho an'ireo lahasa nomaniny, na ny fampifanarahana na ny famenoana, fa ny fanatonana azy miaraka amin'ny iPhone, iPad ary iPod Touch. Ny mpampitohy izay ampidirina ao amin'ilay fitaovana dia kely dia kely ka mifanaraka amin'ny ankamaroan'ny tranga sy fonony ho an'ny iPhone na iPad, ary hiaro ny fifandraisan'ny varatrao amin'ny vovoka na koa amin'ny rano. Miverina tanteraka io ary misy LED ihany koa izay manondro fa mandoa izany.
ZNAPS amin'ny tetikasa iray izay efa nihoatra lavitra ny tanjona kasaina haroso, saingy afaka mandray anjara ihany ianao ary mahazoa ny fifandraisanao andriamby $ 11 eo ho eo (miampy $ 3 ny vidin'ny fandefasana) na mihoatra, miankina amin'ny isan'ny mpampifandray tianao. Mazava ho azy, raha tsy manana olana amin'i Apple sy ireo patanty ananany izy ireo, satria i Apple dia manana teknolojia MagSafe, ary mety ho ny lazan'ilay fitaovana no mahatonga ny mpisolovava an'i Cupertino handray andraikitra momba izany. Raha mila fampahalalana bebe kokoa ianao na mandray anjara amin'ilay tetikasa dia kitiho fotsiny Ity rohy ity. Efa nanafatra ny ahy aho.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » ZNAPS, mpampitohy andriamby hamenoana ny iPhone sy iPad